Imilinganiselo yeHGH: Indlela yokukhetha i dose yeHGH ngokufanelekileyo? | AASraw
Imilinganiselo yeHGH: Indlela yokukhetha i dose yeHGH ngokufanelekileyo?
/Blog/HGH , ukukhula komntu/Imilinganiselo yeHGH: Indlela yokukhetha i dose yeHGH ngokufanelekileyo?
ezaposwa ngomhla 11 / 19 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo HGH, ukukhula komntu.
Yintoni i-hormone yokukhula komntu?
Umzimba ngokuvelisa uvelisa i-hormone yokukhula (i-HGH okanye i-GH) kwi-gitulo ye-pituitary, kwaye, njengoko igama layo lithetha, lijongene nokukhula kweseli kunye nokuhlaziywa kwakhona. Ukwandisa isistim esiswini kunye neethambo zesisindo akunakwenzeka ngaphandle kwe-GH, kodwa kudlala indima enkulu ekugcineni impilo yazo zonke izicubu zomntu, kubandakanya ezobuchopho kunye nezinye izitho ezibalulekileyo. Xa ifihliwe, i-GH ihlala isebenzayo egazini kwimigca embalwa nje kuphela, kodwa eli lixesha elaneleyo lokuba isibindi liguqulwe ekubeni yimiba yokukhula, ebaluleke kakhulu into ebalulekileyo yokukhula kwe-insulin-i-1, okanye i-IGF-1, unobuninzi bempahla ye-anabolic. Oososayensi baqala ukuvuna i-GH kwiingcambu ze-clanders kwi-1950s, kodwa abazange baqulunqe i-HGH yokuqala kwiibhubhoratri kude kube yi-1981, kunye nokusetyenziswa kwayo njengokwenza izidakamizwa zokuphucula ukusebenza ngokukhawuleza emva koko.
Yintoni iHgh Cycle?
Njengengqungquthela ngaphambi nangemva kwesithokiso okanye ubungqina buza kubonisa, lubhekisela kulo ukusetyenziswa kwama-hormonal ukukhula kwabantu, makube yintlangano okanye yemvelo, ngexesha elithile.
Umjikelezo oqhelekileyo we-somatropin uhlala kwi-4 kwiinyanga ze-6 kwaye i-hgh ivame ukufakwa kunye ne-testosterone supplement kunye ne-steroids.
I-Hgh Cycle Dosage
Umjikelezo omhle kakhulu uya kusebenza kuphela xa wena kuthatha iqondo elifanelekileyo.
Nangona kunjalo, ukusebenzisa i-hgh ye-synthetic ayifani nokusebenzisa i-steroids kuba akukho myinge ephantsi.
Ukuba ubuza malunga neyona nto ubuncinci okanye i-dose ephezulu kumjikelezo uza kufumana iimpendulo ezahlukileyo. Nangona kunjalo, ungasebenzisa ezi zikhokelo zilandelayo kwaye wenze izilungiso ezifunekayo.
Ngeenjongo zokulwa nokuguga ungaqala kunye ne-2 IU nsuku zonke. Unokuzijoba nayiphi na imini yomhla kwisisu esipheleleyo okanye esingenalutho, ukhetho lwakho. Unokuzijoza nayiphi na ixesha kodwa abaninzi banokukwenza ngexesha lentsasa okanye ixesha ngaphambi kokulala ebusuku njengoko ezo zihlandlo apho umzimba wakho ukhulula ama-hormone.
Ukufaneleka komzimba, ukwakha umzimba, ukuphucula ukusebenza kwezemidlalo kunye nokulahlekelwa kweoli, i-4 IU imihla ngemihla iya kulungeleka. Abasebenzisi be-Hardcore nabasemgangathweni bangakwazi ukuphakamisa umyinge kwi-6 IU, kodwa xa bekhuphuka phezulu ukuba iziphumo ezibi ziqala ukukubetha nzima.
Ngethuba lokuqala umjikelezo weehaji eziphezulu ziyakwenza, kodwa unokwandisa umyinge kuxhomekeke kwimeko.
Ukuba umgomo wakho ukukhawuleza ukubuyiswa kwakho emva kokulimala, ukwandisa inani kwi-8 kwi-16 IU imihla ngemihla. Lo ngumlinganiselo ophezulu kwaye awufanelanga wonke umntu.
Xa uthatha nantoni na ephakamileyo kune-4 IU, hlukanisa umthamo ngalo lonke usuku kunokuba uthathe enye enye.
Umbuso wezeMpilo kunye nokulingana kwe-hormone yokukhula
Kufuneka ucinge ngemiphumo ye-HGH, nangona ilula (jonga enye inqakumalunga nemiphumela emibi yeHGH ukuze ufunde kabanzi):
Igazi leswekile. Iingxaki nge-pancreas kunye nesifo sikashukela sinokubangela iziphumo eziphambili zeHGH. Yingakho ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa i-HGH, kufuneka udlule ukuhlolwa kwegazi ukuze ufumane isilinganiselo seswekile yegazi okanye uthathe uvavanyo lokunyamezela kwe-glucose. Kwakhona, musa ukuthatha i-hormone yokukhula xa izihlobo zakho ezisondeleyo zinesifo sikashukela. Ukuba uvavanyo lwakho lubonisa i-4-6 mmol / l, ungathatha i-HGH ukuya kwi-10 IU ngaphandle Exulen insulin. Ukuba izinga lakho liphakamileyo, yenze uviwo olunzulu lwezonyango.
Umxinzelelo ophezulu. I-hormone yokukhula ngokuqhelekileyo ibangela ukugcinwa kwamanzi kunye nokwandisa uxinzelelo lwegazi, ngoko ke ukuba unengxaki yempembelelo yegazi, kufuneka ukhethe kuphela i-hormone yokukhula yamachiza (iJintropin ne-Ansomone), ebangela imiphumo emibi kunye nokunyusa izinga lakho leHGH ngokukhawuleza ukuphepha amanzi kugcinwa.
Cancer. Ungafunda malunga nayo nqaku malunga nalo imiphumela ngcaciso e ngakumbi. Ngamafutshane, i-hormone yokukhula ayikwazi ukukhupha umdlavuza, kodwa inokukhawuleza ukuphuhliswa kwesisu xa sele ikhona.
Ngoko ungasebenzisi iHGH okanye i-steroids ukuba unomdlavuza okanye izihlobo zakho ezisondeleyo zijongene neengxaki nazo.
Iziphumo zengqungquthela ye-Hgh zisebenza kakuhle, kodwa njengoko kuboniswe apha, iziphumo ezibi ze-hormone zokukhula kwabantu azikwazi ukugxothwa.
Inyaniso yokuba ukusetyenziswa kwabo ilawulwa ngokungqongqo iphinda ithi ininzi malunga neengozi ezibandakanyeka kwisicelo sabo.
Ukuba usaphila izibonelelo ezibonelelwa ngu-hgh kodwa ungafuni ukujongana nazo imiphumela, indlela engcono yokujongana nayo kukuhamba ngokwemvelo ngeyiphi na into echazwe apha.
tags: ukuthenga iHGH powder, uthenge ukukhula komntu we-hormone powder, HGH powder, ukukhula komntu we-hormone powder
Ukwakhiwa komzimba weHGH: Indlela yokuthatha kunye nokuxuba iHGH?
Ngaba i-Olistat ipowder ekhuselekile kwaye isebenzayo?	Ukwakhiwa komzimba weHGH: Indlela yokuthatha kunye nokuxuba iHGH?